Go’itaankii Soomaaliland (Unilateral Secession) Faysal Cabdi Rooble Qaybtii 5aad | CeelSheekh News
Go’itaankii Soomaaliland (Unilateral Secession) Faysal Cabdi Rooble Qaybtii 5aad
February 27, 2020 - Written by Guleid Essa
(Ceelsheekh-News) Himilada gooni Isutaaga Soomaaliland waa mi guun ah. Waxa astaamihii igu horeeyey ee arinkaasi soo ifbaxeen bishii December, 1961kadib markii ay saraakiil S/landers ah oo ka tirsanaa xooga dalka ay kacdoon kooban abaabuleen.
Waxaanay diideen nakhtiim lagu sameeyey axdigii isutaag ahaa ee 1960. Axdigaasina barlamaanki xikigaas jiray ee Soomaaliya ku midoowday ee fadhigiisu ahaa Moqdisho ayaa ansixiyey.
December 1961 waxa qarxay kacdoonkii loobixiyey “Inqilaabkii Xasan Kayd.” Xasan Kayd sarkaalka hogaaminayey kacdoonka ayuu ahaa laakiin saraakiil kale ayaa wehelinaysay.
Waxaa ka mid ahaa Abdi Xuseen (Cabdi Xabashi oo hada Jigjiga aan ku soo arkay) iyo Saciid Cali Giir. Dad isku dhafan ayey ahaayeen. Qaar ka mid ah saraakiishan waxaa lagu soo tababaray Akadaamiyada Sandhurst Royal Military oo Ingriiska ku taal.
Inkasta oo laga addkaaday Xasan Kayd iyo xulifadiisii, hadana fakirka in Soomaaliland ka go’do Koonfur Soomaaliya ma dhiman.
Fakirkaas 1970hii ayuu dib u soo noolaaday. Dilkii iyo xasuuqii Jasiir ka dhacayna seetada ayuu u furay. Qax iyo in aqoonyahan badan oo rer-Waqooyi ahi dalka ka baxsadaan ayaa timid. Gobolada waqooyina tacadi xad dhaaf ah ayey dawladii milatarigu ku soo rogtay.
Markay taariikhdu ahay 1979 – 1980kii ayaa shir beeleedu lagu qabtay dalka sacuudiga sida ku taal buuga uu qoray I.M.Lewis, ” Blood and Bone.” Engineer Maxamed Xashi Cilmi aya horumood ka ahaa aasaaska jabhadii Somali National Movement (SNM). Shirkii uugu horeeyey waxa lagu qabtay guriga Maxamed Xashi. Shirar kaa hordhaca ahaa ka dambeeyey ayaa lagu soo macsuumay shaqsiyaad ka soo jeeda beelaha Bari iyo Galbeedka.
ANU Maxamed Cabdilahi Xasharo oo rer- Awdel ahaa, saaxiibona aanu ahyn, ayaa ka mid ahaa. “Waanu diidnay in aanu ka mid noqono jabhad labada soo hor dhistay” ayuu ii sheegay.
Is-afgarasho loo dhanyahay ma dhicin. Hase ahaatee SNM oo mar dambe lago dhawaaqday waxay ku guulaysatay in ay midayso dhowr kooxood oo u badnaa ururo dhalinyaro (youth organization) oo Yurub ku baahsanaa. Xataa Mareykanka abaabulkii SNM wuu soo gaadhay.
Burburkii 1991 dabadeena, goni isutaag dagdag ah oon la sii qorsheyn ayaa SNM ku dhawaaqday bishii May 1991. Xikigaas ku dhawaaqi dhacayo barnaamijka siyaasadeed ee SNM (SNM Political Program) kuma jirin gooni isutaag.
Jabhada ilaa 1980dii waxa qorshaha ugu jiray in Soomaaliya iyadoo mid ah dib lo soo habeeyo nidaam awoodu baahsantahayn laga dhiso . AUN Mustafe Xaaji Nuur iyo koox la jaal ahyd waxay 1980hii ku taliyeen in Soomaaliya laga dhiso nidaam Federal ah (kuwa yidhaa TPLF ama rer-galbeedka ayaa federaalka keena waa moogayaal – markale ayaan ka hadlidoonaa mowduucaas).
Xata hindise uu qoray Axmed M. Silaanyo, markii ay dawladii milatarigu burburtay, waxa uu soo jeediyey in dawlad ku meelgaadh ah ay soo dhisaan SNM iyo USC.
Hindisahaasi waxa uu ku taliyey in Gobolada Waqooyiga SNM gacanta ku dhigto gole dawladeedna soo dhisto. Sidoo kale, USC iyana gobolada Koonfurta si la mid ah in ay uso habayso.
Hindisahaasi la soo yeedhay Sillanyo, “A Proppsal For Establishing a Transitional Government” waxa dadka qaar badani u arkeen in uu jeedo guracan lahaa. Gaar ahaan, waxa uu bustaha ku qariyey jabhadii ugu da’da weynayd ee SSDF. Jabhado kalena maba xaalayn. Meel fogna maba gaadhin. Xataa shirkii Boorame Boorame aguma soo qaadin.
Si kastaba ha ahaatee, mar hadii Soomaaliland ku jirsatay gooni isutaag 30 jirsaday, nabad keentay, ciidamo dhamaystiran dhistay, xadkeeda soo xidhay, calan cusub samaystay, xafiisyo caalami ah (sida kan Qaramada midoobay, safaarodo, deeq-bixiyayaal (donor) ka furan yihiin, maxaa ictiraafka ka hortaagan?
Waa mawduuca Qaybta 6aad ee la soco.